पौराणिक कथा – मझेरी डट कम
आज अध्ययन गर्दै जाँदा मेरो अघिल्तिर श्रीमद्भागवत र शिव पूराणका दुई पूराणहरू नजरमा परे । हुन त यी पहिलो पटक मेरो नजरमा परेका होइनन् । मैले कहिलेकाहीं अध्ययन गरेर त्यहाँबाट केही कथाहरू पनि पस्किसकेको छु । श्रीमद्भागवत रामप्रसाद जोशीबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएकोलाई पल्टाउन मन लाग्यो र पल्टाएँ । मेरा नजर सिधै उषा र अनिरुद्धको कथामा पर्यो ।
by Biju Subedi
आजभन्दा २६०० वर्ष अगाडि हिमालय मुनिको फाँटलाई जम्बुद्वीप भनिन्थ्यो । त्यहाँ अनेक साना ठूला अधिराज्यहरु तथा गणराज्यहरु थिए । ती अधिराज्यहरुमा राजाहरु तथा गणराज्यहरुमा गणपतिहरु शासन गर्दथे ।
त्यहाँ हिमालय नजिकै राप्ती नदीको किनारमा शाक्य जातिको कपिलवस्तु भन्ने राज्य थियो । यसको राजधानी कपिलवस्तु नगर थियो । गौतम थर भएको शुद्धोदन यहाँको राजा हुनुहुन्थ्यो । महामायादेवी राजा शुद्धोदनकी महारानी थिइन् ।
एउटा असुर थियो दम्बोद्भव । उसले सुर्यदेवको अत्यन्तै ठूलो तप ग¥यो । सुर्यदेव प्रसत्र भएर प्रकट भएर वरदान माग भन्दा उसले ‘अमरत्व’ को वरदान माग्यो । सुर्यदेवले यो सम्भव छैन भने । तब उसले माग्यो कि उसलाई एक हजार दिव्य कवचको सुरक्षा प्राप्त होस् । यीमध्ये एउटा पनि कवच मात्र उसले तोड्न सकोस् जसले एक हजार वर्ष तपस्या गरेको होस् । जसै कोही यसरी कवच तोड्न सक्छ उसको पनि तत्कालै मृत्यु होस् ।
आजका शिष्यहरुको ज्ञानको तहलाई; उनीहरुको सिकाइको स्तरलाई एक सानो बोधकथाबाट सुरु गर्न चाहन्छु । यो कथा प्राचीनकालका गुरुशिष्यको बीचमा घटित कथा थियो । तर पनि कथाले यसयुगका मर्महरू बोकेको छ । अहिलेको यथार्थलाई पनि यसले चित्रण गरेको छ ।
एकजना गुरुको आश्रममा थुप्रै शिष्यहरू ज्ञान आर्जन गर्न जम्मा भएका थिए । गुरुकुलमा गुरुको सान्निध्यमा रहेर धेरै कुरा जाने, धेरै कुरा सिके । ज्ञानमा चेलाहरुलाई पारंगत बनाइसकेपछि उनीहरुलाई लिएर एकदिन गुरु यात्रामा निस्के । त्यो जमानामा यातायातको साधनमा गोरुगाढा मात्र उपलब्ध थियो । यात्राको सर्वोत्कृष्ट साधन नै रथ र गोरुगाढा थिए । टाढाको बाटो गोरुगाढामा चढेर उनीहरू प्रस्थान गरे ।
मानव जीवन एउटा चेतशील र अमूल्य जीवन हो यो अमूल्य जीवनमा मानिसले सार्थकतालाई हात पार्न सक्नु पर्छ र सार्थकतामा बाँचेको सार हुन्छ । हाम्रो धर्मशास्त्र, पूराणहरूले यही भन्दछन् कि यो सार्थक जीवन (अमूल्य जीवन)लाई खेर जान दिन हुँदैन र सार्थक उपलब्धी (मोक्ष प्राति)को लागि खर्च गर्नु पर्दछ । यस विषयमा गरुडले र विष्णु भगवानसँग जन्म मरणको चक्रमा मानिसले कसरी नरक पाप भोगी प्रेत मातृ गर्भ भेट्छन भन्ने जिज्ञासा राख्नुहुन्छ ।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्…
रामायणमा उल्लेखित राम रावणको युद्ध सत्य र असत्यको बीचको धर्म युद्ध थियो। सत्यको पक्षधर भएको कारणले रामको विजय निश्चित थियो तापनि रावणलाई कम मूल्याङ्कन गर्नु पनि राम्रो होइन। रावण एक कुशल योद्धा थियो र ऊ समान विद्वान र युद्ध विद्याको ज्ञाता अरू कोही थिएन। उसको परिवारमा ऊ बाहेक अरू पनि युद्धकौशलका जानिफकार थिए, तथापि अधर्मको बाटो रोज्नु नै रावणको पतनको एकमात्र कारण थियो। भनिन्छ कि राम-रावणको युद्धको समयको एक घटना यदि निर्विघ्न घटेको भए रावणको पराजय करीब असम्भव नै हुने थियो। या भनौँ रावणको आतंकको समाप्त हुने नै थिएन। यो त्यति बेलाको कुरा हो जब रावणको छोरा मेघनाद युद्धमा मारीयो। त्यो प्रसङ्ग यसरी प्रस्तुत भएको पाइन्छ।
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीका शिवरात्रि पुजाको विशेष महत्व छ किनभने सृष्टिको प्रारंभमा यसै दिन मध्यरात्रिकालमा भगवान् शंकर ब्रह्माबाट रुद्रका रूपमा अवतरण भएका थिए। प्रलयकालमा यसै दिन प्रदोषको समयमा भगवान शिव ताण्डव गर्दै ब्रह्माण्डलाई तेस्रो नेत्रको ज्वालाबाट समाप्त गर्ने भएकोले यस पर्वलाई महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि रुपमा पूजा गर्दै आराधना गरिन्छ । तीनै लोककी अपार सुन्दरी तथा शीलवती गौरीलाई अर्धाङ्गिनी बनाउने शिवलाई शिवशक्तिको रुपमा प्रेत र पिशाचहरूबाट घेरिएर बस्दै आएका छन भन्ने मान्यता रहेकोछ । उनको रूप बडो विचित्रको छ। शरीरमा मसानको भस्म, गलामा सर्पहरूको हार, कण्ठमा विष, जटाहरूमा जगत्-तारिणी पावन गङ्गा तथा मस्तकमा प्रलयङ्कर ज्वाला छ। साँढेलाई वाहनको रूपमा स्वीकार गर्ने शिव अमङ्गल रूपमा रहेर पनि अन्जानमा भएको ध्यानबाट पनि प्रशन्न भई भक्तहरूलाई मंगल प्रदान गर्दै उद्दार गर्ने दयालु शंकरलाई र श्रीसंपत्तिका दाता मानिन्छ । यस्ता शक्ति रुपेन शिवको कथाको रुपमा यहाहरू माझ यसरी प्रस्तुत भएकी छु ।
सृष्टिको प्रारंभिक कालमा भगवान विष्णुको आज्ञाले ब्रह्माजीले जीव तथा मनुष्ययोनीको रचना गर्नुभयो । तर पनि आफूले गरेको त्यस्तो सृजर्नाबाट सन्तुष्ट हुनु भएन । ब्रह्माजीले केही सृष्टिमा कमि भएको महसुस गर्दै विचार गर्नुभयो, “यस्तो लाग्यो कि यो ब्रह्माण्डमा केही चिजको कमि छ जसको कारणले गर्दा चारैतिर अन्धकार र मौनता छाएको छ।”
हामीले भागवतहरूको अध्ययन गर्यौं भने देवी देवताहरूको र दैत्य/दानव बीचको द्वन्द्व, युद्धका कथाहरू निकै पढ्न तथा सुन्न पाउँछौं । यी कथाहरूको श्रवणमा ध्यान दिने तथा सुनाउने काम सूतजीले ऋृषि मुनिहरूलाई गर्नुहुन्छ –
एक दिनको कुरा हो सबै मुनिहरूले सूतजीलाई दुर्गा देवीको कुनै एक अद्भुत/अनौठो खालको कथा सुनाउनको लगि अनुरोध गरे । महाप्राज्ञ सूतजीले पनि दुर्गा देवीका धेरै कथाहरू सुनाइ सक्नुभएको थियो । त्यस दिन भने सूतजीले दुर्गम नामको असुरको वीरता र उसबाट गरिएको आतङ्कबाट देवलोकका देवी देवता र स्वर्गलोक नै आफ्नो अधिन बनाएको कथा श्रवण गराउनु भयो । जब दुर्गमासुरले सबै चिज आफ्नो अधिन बनायो तबदेखि देवताले आफ्नो यज्ञभाग पाउन छाडे ।
मनमा अब हाँसो खुसी भर्न पाइन्न कि
मर्नेबेला आफ्नै देशमा मर्न पाइन्न कि !
हराउँदै छ संस्कृति र परम्परा हाम्रो
मरेपछि स्वर्गलोकमा पर्न पाइन्न कि
सत्य युगको कुरा हो पृथ्वीमा बलि नाम गरेका बढो प्रतापी, दानी राजा थिए । उनको भण्डार द्रब्यले सधै भरिपूर्ण भरिएको हुन्थ्यो । जो केही पनि माग्न गए खाली हात फर्काउदैनथे । उनको कीर्ति चारैतिर फैलिएको थियो । उनको यो प्रतापले स्वर्गको इन्द्र नै डगमगायो ।
“माओवादी समस्या धार्मिक आधारबाट सम्झाउनु पर्छ” युधिष्ठिरले बहस सुरु गरे । आजको प्रातः भ्रमणको विषय थियो– देशको समसामयिक समस्या ।
अगेनाको अगाडि घिऊ राख्यो भने पग्लिन्छ भने जस्तै मानव जाति जतिनै विद्वान हओस् ऊ भोग विलासबाट टाढा हुन सक्दैन । काम/वासनामा ग्रस्त मानिसहरू यतिसम्म ग्रस्त हुन्छन् कि तिनीहरूको कामनालाई पुरा गर्न नत धन, दौलत या स्त्रीले सक्दैनन् । हामीले हाम्रा ठूला ठूला धर्म ग्रन्थहरुको अध्ययन गर्न सक्छौ । महाभारत र रामायणका ती अहम् लीला पढन सक्छौं । ती सबैका कारणहरूमा एउटा कारण भनेको स्त्री नै हो भन्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा हाम्रा धर्म ग्रन्थबाट के जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ कि हाम्रा इन्द्रिय यति बलवान छन् । ठूला ठूला ऋषि–मुनि तथा विद्वानहरुलाई पनि विचलित पार्दछन् र सहजै बसमा ल्याउँछन् । त्यसो हुँदा जुनसुकै स्त्रीबाट टाढा रहनु पर्दछ भन्ने धारणालाई बिलासी संसारबाट मानिसले मुक्ति पाउन साह्रै कठिन छ ।
दधीचिको त्याग र इन्द्रलाई ब्रह्महत्या
हामीले कहीं त्यागको कुरा गर्नु पर्यो भने दधीचिको नाम लिन्छौं । दधीचिले के त्यस्तो महान त्याग गरेका थिए, किन गर्नु परेको थियो र कस्को लागि गर्नु परेको थियो त्यो त्यागसम्म आउँदा के के घटना घटेका थिए र त्यो त्यागले कसलाई फाइदा गर्यो भन्ने कुराको ज्ञान हामीमा हुनै पर्दछ ।
उहिले पौराणिक कालमा त्वष्टा नामका आदित्य देवता थिए । उनले असुरकुलकी कन्या विवाह गरेका थिए । यिनैबाट विश्वरुप नाम गरेका पुत्रको जन्म भएको थियो । विश्वरुपका तीनवटा शिर थिए । यी तीनवटा शिरका तीनवटा मुख पनि थिए । विश्वरूपाले एउटा मुखबाट सोमलताबाट तयार पारिएको रस (सोमरस), एक मुखबाट सुरा पिउथे र तेस्रो मुखबाट भने अन्न ग्रहण गर्दथे ।
कुनै समयमा अवन्ति नाम गरेको देशमा एक जना कदर्य नाम गरेका ब्राह्मण बस्तथे । उनी धेरै धनी थिए । उनको धेरै जग्गा जमिन हुनका साथै प्रसस्तै अन्न बाली उत्पादन हुन्थ्यो । उनका घरमा धेरै नोकर चाकर तथा हली गोठालाहरु थिए । घर परिवार तथा नातागोता पनि असाध्ये राम्रा र कुसल थिए । यी सबै राम्रो भए पनि उनी आफु असल थिएनन् । उनी अति नै घमण्डी, लोभी र दुर्जन थिए । कहिल्यै पनि आफ्ना घर परिवामा राम्रो लाउन र मिठो खान नदिने र सबैलाई गालि मात्र गर्ने, रुखो बचन भएका जहिले पनि अर्कालाई दोष मात्र दिन जानेका कसैले राम्रो काम गरे पनि गाली नै गर्ने नराम्रो काम गरो भने त झन् उसले उनीबाट कहिल्यै पनि माफ भने पाउँदै नपाउने ।
एउटा गाउँ अथवा शहर अझ भनौँ देशको कुनै भुभागमा चार जना बलवान पुरुषहरू बस्थे । पहिलोसित बुद्धि थियो । दोश्रोसित बल थियो । तेस्रोसित बल र बुद्धिलाई सदुपयोग गर्ने क्षमता थियो ।
चौथोसित यी तीन जना लगायत आफू स्वयमलाई एकतामा बाध्ने सुत्र थियो ।
यसरी बलवान पुरुषहरूले आ आफ्न बिशेष गुणले गर्दा हरेक कुरामा सफलअता हाँसिल गर्दै थिए ।
महाभारत युद्धपछिका व्यास
मैले भविष्यमा हेर्दा जे देखेको थिएँ त्यही भयो । युद्धभूमिमा हेर्दा म लासैलासको पहाड देखिरहेछु रगतको नदी देखिरहेछु, यहाँको हावामा विष पाइरहेछु, ऋषि भएर कसैप्रति-स्नेह नराख्दा नराख्दै पनि मेरो मन विचलित भएको ? मानवसंहारको दृष्यले मनलाई दुखी बनायो कि ? मेरा औरस पुत्र धृतराष्ट्रको दुखले दुखी बनायो ? धृतराष्ट्रप्रति मलाई पुत्रमोह त कहिल्यै थिएन किनभने मैले माता सत्यवतीको वचनलाई हार्न नसकेर मात्र उनका विधवा बुहारीहरूलाई गर्भवती गराएर पुत्र प्रदान गरेको थिएँ । तर, त्यो बेलामा मैले मातालाई भनेको पनि थिएँ-“माता, मबाट जन्मिँमा यी सन्तानहरू ऋषिपुत्र झैं हुने छैनन् । भविष्यको कुरा केही भन्न सकिन्न । हुन सक्छ यी सन्तान नै हस्तिनापुरको रक्षा समर्थ नहोलान् ।”